Posted by Tranquillus | Feb 1, 2020 | Si aad u degto oo uga shaqeyso Faransiiska
Guud ahaan, ereyga "fasax" waxaa loola jeedaa oggolaanshaha in la joojiyo shaqada uu shaqo-bixiye kasta siiyo shaqaalihiisa. Khadadka soo socda, waxaan soo jeedineynaa inaan kaa dhigno inaad ku ogaato midka ka duwan Noocyada fasaxa iyo sidoo kale qaababkooda kala duwan.
Fasaxa la bixiyay waa xilliga fasaxa oo loo shaqeeyuhu, iyada oo ay ku waajibtay waajibaad sharciyeed, inuu siiyo shaqaale. Dhamaan shaqaaluhu xaq ayey u leeyihiin, iyada oo aan loo eegin nooca shaqada ama nashaadaadka ay qabtaan, shahaadadooda, nooca ay yihiin, nooca mushaharkooda iyo jadwalka shaqadooda. Si kastaba ha noqotee, inkasta oo ay qasab ku yihiin dalal badan, tirada fasaxa la bixiyaa way ku kala duwan yihiin waddan ilaa waddan. Si kastaba ha noqotee, gudaha Faransiiska, dhammaan shaqaalaha waxay leeyihiin xuquuq buuxda oo ah 2 maalmood oo fasax fasax ah bishii. Marka la soo gaabiyo, shaqaalaha si joogto ah ugu shaqeeya isla loo shaqeeye isla goobtana ka shaqeeya ayaa ka faa'iideysan doona fasaxa mushaharka ah.
KELIYA KHARASHKA LACAGTA
Markii aan ka hadalno fasax fasax la'aan, waxaan u jeednaa taas oo aan lagu xakameynin Xeerka Shaqaalaha. Si looga faa iideysto, shaqaaluhu kuma qasban yahay wax shuruudo ama nidaam ah. Si kale haddii loo dhigo, waa heshiis guud oo ah in loo shaqeeyaha iyo shaqaaluhu ay qeexaan muddada iyo ururkooda. Marka la soo gaabiyo, shaqaale ayaa suurogal ah inuu codsado fasax lacag-la’aan ah sababa kala duwan awgood. Sidaas darteed waa xor in loo isticmaalo ujeeddooyin xirfadle (abuur ganacsi, waxbarasho, tababar, iwm) ama ujeedo shaqsiyeed (nasasho, dhalmo, safar, iwm). Fasaxyada noocan ah, waqtiga oo dhan maqnaanshihiisa ayaa ugu dambeeya, shaqaalaha lama bixin doono.
FARSAMADA ANNUAL LEAVE
Sida ku xusan Xeerka Shaqaalaha, shaqaale kasta oo dhammaystiray hal sano oo adeeg waxtar leh wuxuu xaq u leeyahay fasax sanadeed. Fasaxyada labixiyay waa shan usbuuc xaalada hada jirta, iyada oo aan tixgelin la siinin ciidaha dadweynaha iyo usbuucyada shaqada ee uu shaqaaleeyuhu siiyay. Dabcan, fasaxa sannadlaha ah waxaa la bixiyaa oo keliya si waafaqsan sharciga iyo jadwalka shirkadda. Marka la soo koobo, shaqaale kasta, shaqo kasta, shaqadiisa, shahaadadiisa, saacadaha shaqadiisa wuu ka faa'iideysan karaa fasaxan.
Fasaxa imtixaanka, sida magaceedu muujinayo, waa nooc fasax qaas ah oo, marka la siiyo, siiya shaqaale kasta fursad uu ku maqnaado si loogu diyaariyo qaadashada hal ama in ka badan imtixaan. Si looga faa'iideysto fasaxan, shaqaalaha haysta fikradda ah helitaanka cinwaan / dibloomaha aqoonta tikniyoolajiyada la ogolaaday waa inay si lama huraan u tahay caddeynta mudnaanta 24 bilood (2 sano) waana inay lahaato tayada shaqaalaha shirkadda muddo 12 bilood ah (1 sano). Si kastaba ha noqotee, waxaa wanaagsan in la ogaado in shaqaale ka shaqeeya meherad farsamo oo ka yar 10 qof ay tahay inuu caddeeyo ka weynaantiisa 36 bilood.
Fasaxa tababarka shaqsiyeed waa mid kamid ah tababarka taasoo shaqaaluhu ku raaxeysan karo inuu ku jiro CDI ama CDD. Thanks to fasaxan, dhammaan shaqaalaha waxay awood u leeyihiin inay raacaan hal ama in ka badan tabobarro, si shaqsi ahaaneed ah. Marka la soo koobo, kani ama tababarkan (yaasha) waxay u oggolaan doonaan inuu gaaro heer sare oo shahaado xirfadeed ah ama wuxuu isaga siin doonaa habab kala duwan oo horumarineed ah marka lagu gudajiro gudashada mas'uuliyadiisa shirkadda dhexdeeda.
LEAVE ECONOMIC, BULSHADA iyo TABABARKA UNION
Fasaxa tababarka dhaqaalaha, bulshada iyo ururka waa nooc fasax ah oo la siinayo shaqaale kasta oo jeclaan lahaa inuu kaqeyb qaato tababaro dhaqaale ama bulsheed ama kalfadhiga tababarka ururka. Fasaxdan waxaa guud ahaan la siiyaa iyada oo aan la haysan xaalad mudnaan sare ahaaneed waxayna u oggolaaneysaa shaqaalaha inuu isu diyaariyo inuu ku jimicsado howlaha howgalka ururka.
READ Waa maxay faraqa u dhexeeya mushaharka saafiga ah iyo mushaharka guud?
WAXBARASHADA IYO FASALKA BAARITAANKA
Barista iyo fasaxa cilmi baaristu waa nooc fasax ah oo shaqaalaha oo dhan siiya suurtagalnimada waxbaridda ama fulinta (sii wadista) hawlahooda cilmi-baarista ee kaladuwan iyo kuwa gaarka loo leeyahay. Si looga faa'iideysto, shaqaaluhu waa inuu, marka hore, ogolaansho ka helaa loo shaqeeyaha marka lagu daro inuu ixtiraamo shuruudaha qaarkood. Fasaxa barista iyo cilmi baaristu waxay socotaa celcelis ahaan:
-8 saacadood asbuucii
-40 saacadood bishii
-1 sano oo buuxa.
FUUQ BAX AH
Waa wax la wada ogyahay in Xeerka Shaqada iyo Heshiiska Wadajirka ay dhisteen fasax jirro oo lacag leh. Taas macnaheedu waxa weeye haddii ay dhacdo jirro uu caddeeyay caddayn caafimaad, qof shaqaale ah, xaalad kasta oo ay ku sugan tahay (hayaha, tababaraha, ku meelgaarka ah), wuxuu xaq u leeyahay inuu helo "caadi" fasax jirro. Muddada fasaxan waxaa go'aaminaya dhakhtarka iyadoo kuxiran kiiska la daaweynayo.
Si looga faa iideysto fasaxa jirada, shaqaaluhu waa inuu u diraa shaqadiisa ogeysiis joojinta shaqada ama shahaadada caafimaadka inta lagu jiro 48ka saacadood ee ugu horeysa maqnaanshaha.
Intaa waxaa sii dheer, haddii shaqaaluhu u arko inuu la ildaran yahay cudurro halis ah, waxaa inta badan lagula taliyaa CLD (fasaxa muddada-dheer). Ta dambe ayaa la isku raacsan yahay oo keliya kadib marka la raaco fikirka guddiga caafimaadka wuxuuna socon karaa celcelis ahaan inta u dhaxeysa 5 iyo 8 sano.
Dhammaan dumarka shaqeeya ee uurka leh waxay xaq u leeyihiin fasaxa umusha. Fasaxaani waxaa ku jira fasaxa dhalmada ka hor iyo fasaxa umusha ka dib. Fasaxa umushu wuxuu socdaa 6 usbuuc ka hor (loo maleynaayo) dhalmada. Shaqada fasaxa umusha ka dib, waxay soconaysaa 10 toddobaad dhalmada kadib. Si kastaba ha noqotee, muddada fasaxaani waa kala duwan yahay haddii shaqaaluhu mar hore dhaley ugu yaraan 2 carruur ah.
READ Canshuuraha ajnabiga ee Faransiiska
TUSMADA FARSAMADA ENTERPRISE
Fasax u sameynta ganacsi waa nooca fasaxa ee u siinaya shaqaale kasta suurtagalnimada fasaxa ama ku qaadashada waqti-dhiman si uu sifiican maalgashi ugu sameeyo mashruucan ganacsigiisa. Si kale haddii loo dhigo, fasaxani wuxuu siinayaa shaqaalaha inuu si ku meelgaar ah u joojiyo qandaraaskiisa shaqo si uu u awoodo inuu abuuro shaqsi, beero, ganacsi ama farshaxan. Sidaa daraadeed waa ku habboon yahay hoggaamiye kasta oo mashruuc leh oo leh fikradda ah in si badbaado leh loo bilaabo. Fasaxa abuuritaanka ganacsiga wuxuu kaloo u oggolaanayaa qofka shaqaalaha ah inuu maareeyo ganacsi cusub oo hal abuur leh waqti cayiman.
Shaqaalaha raba inuu ka faa'ideysto fasaxan waa inuu lahaadaa ugu badnaan 24 bilood (2 sano) ama in ka badan shirkadda uu ka shaqeeyo. Fasaxa abuuritaanka ganacsi wuxuu leeyahay waqti go'an oo ah 1 sano oo la cusbooneysiin karo hal mar. Si kastaba ha noqotee, isagu gabi ahaanba waa mushahar.
U SOO GUURID masiibo dabiiciga ah
Fasaxa musiibada dabiiciga ah waa fasax qaas ah oo shaqaale kasta uu ku raaxeysan karo xaaladaha qaar. Runtii, fasaxan ayaa la siiyaa shaqaale kastoo ku nool ama si joogto ah uga shaqeeya meel halis ku jirta (soonaha ay suurtogal tahay inay musiibo dabiici ah saameyso). Sidaa daraadeed waxay u oggolaaneysaa shaqaaluhu inuu haysto 20 maalmood oo uu awood ugu yeelan karo inuu ka qeybqaato nashaadaadyada ururada u fidiya caawinta dhibanayaasha musiibadaas. Lama bixinayo mushaharka maadaama loo qaatay si tabaruc ah.
Noocyada kala geddisan ee fasaxa, goorma iyo sidee looga faa'iideysan karaa? 25-Abriil, 2020Tranquillus
horeKula shaqee koox ahaan iyo meel fog barta 'Slack' La xiriir waqtiga dhabta ah
socdaTusaale boosta si aad u codsato fasax fasax la'aan.